မြစ်ဆုံ: ကျေးဇူး သိတတ်ကြပါစေ
ယနေ. လူတော်တော်များများ ကျေးဇူးတရားဆိုတာကို မေ.နေကြသည်။ တလုပ်စားဖူး သူ.ကျေးဇူး စတဲ.ဆိုရိုးစကားလေးအတိုင်း မြန်မာလူမျိုးလေးတွေ တစ်ပါးသူကျေးဇူးကို ပြန်လည်ပေးဆပ်ဖို. ဝန်မလေးတတ်ကြသူများဖြစ်ပါသည်။ မိမိအရပ်ဒေသရဲ.ကျေးဇူး၊ မိဘများရဲ.ကျေးဇူး၊ ဆွေမျိုးများရဲ.ကျေးဇူး၊ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများရဲ.ကျေးဇူး အစရှိသည်.ကျေးဇူးတရားတွေကို မဆပ်နိုင်ခဲ.သေးရင်တောင် စိတ်ထည်းမှာသတိရနေသင်.ပါတယ်။ တစ်ချို.လူများ ပြန်လည်ကျေးဇူးပြုဖို.နေသာသာ မိမိအပေါ်ကျေးဇူးရှိသူများကို ပြန်လည်စော်ကားနေကြသည်ကို စိတ်မကောင်းဖွယ်တွေ.ရှိရပါသည်။
ကျနော်တို. ဗုဒ္ဓဘာသာတွင်လည်း ကျေးဇူးတရားကိုမမေ.ခြင်းသည်မင်္ဂလာတစ်ပါးမည်သည်လို.ပြောထား
ပါသည်။ ခင်ပွန်းကြီးဆယ်ပါးထည်းမှာတောင် နောက်ဆုံးအချက်၌ ထမင်းတစ်လုပ်၊ရေတစ်မှုတ် စသည်ဖြင်.
ပေးကမ်းချီးမြှင်.ထောက်ပံ.ဖူးသော ကျေးဇူးရှင် ပုဂ္ဂိုလ်တို.၏ အပေါ်၌ ဟုဆိုကာ မပြစ်မှားမိစေဖို. ဆိုထားပါသည်။
တစ်ချို.သောလူများ အင်မတန်မှ အတုယူဖို.ကောင်းသည်ကိုတွေ.ရသည်။ သာဓကအားဖြင်.ဆိုရသော်
လေးစားမိသော ပခုက္ကူဦးအုန်းဖေ ကို ညွှန်ပြရမည်။သူငယ်ငယ်က ကြီးပြင်ရာဒေသ ၊ပညာသင်ကြားခဲ.ရာဒေသ၊ကြီးပွားခဲ.ရာဒေသများကို ပြန်လည်ပြီး ကျေးဇူးဆပ်ထားသည်ကိုယနေ. တွေ.ရမည်။ ဒါတွင်သာမကဘဲ စာအုပ်စာပေကြောင်. သူ.ဘဝ လမ်းမှန်ရောက်ခဲ.သည်ဟုဆိုကာ ယနေ. ပခုက္ကူဦးအုန်းဖေစာပေဆုကိုပေးအပ်ချီးမြှင်.ပီး မြန်မာ.စာပေဖွံ.ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ပံ.ပိုးကူညီပေးခဲ.သည်။
ကျေးဇူးမေ.နေကြသောသူများအတွက် ဖတ်ဖူးသော ပုံပြင်လေး တစ်ပုဒ်ကို ပြောပြချင်တယ်။
ကျေးဇူး သိတတ်လွတဲ. လူတစ်ယောက်အကြောင်းပေါ.
တိုင်းပြည်တစ်ခုမှာ ထင်းခွေပြီးရောင်းစားတဲ. သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက်ရှိတယ်။ သူတို.နှစ်ဦးဟာ အမြဲ
တမ်းအတူတကွ တောထဲကိုသွားလေ.ရှိတယ်။ ရလာတဲ. ထင်းတွေကိုလည်း အတူတူရောင်းကြတာပေါ.။
တစ်ရက်မှာ ဘုရင်.နန်းတွင်းကို ဝင်ခိုးတဲ. သူခိုးဟာ လိုက်ဖမ်းကြတဲ.ရဲမက်တွေ နဲ. သူတို.နှစ်ယောက်အနား
ရောက်လာခဲ.တယ်။ အဲ.ဒီသူခိုးလည်း မလွတ်မှန်းသိတာနဲ. ခိုးလာတဲ.အထုပ်ကို ထင်းခွေသမားတစ်ယောက်
ရဲ. ရှေ.တည်.တည်.ပစ်ချပြီး လွတ်ရာကိုထွက်ပြေးသွားလိုက်သည်။ နောက်ကလိုက်ဖမ်းတဲ. သူတွေက
ပစ္စည်းတွေနဲ.အတူတူတွေ.တဲ.လူကို သူခိုးအဖြစ်နဲ. ဖမ်းလိုက်တာပေါ.။ အဲ.အခါမှာ ကျန်တဲ. ထင်းခွေသမား
တစ်ယောက်က သူ.ကိုပါဖမ်းပါလို. ပြောတာနဲ. နှစ်ယောက်စလုံးကို ဖမ်းသွားကြသည်။
ဘုရင်ကြီးရှေ.ရောက်တော. အကျိုးအကြောင်းလျှောက်တင်တဲ.အခါ ဘုရင်ကြီးလည်း ထင်းခွေသမားနှစ်
ယောက်ကို စစ်မေးတော.တာပေါ.။ အဲ.ဒီအခါမှာ တစ်ယောက် ဒီလိုလျှောက်ထားလိုက်သည်။
"အရှင်မင်းကြီးဘုရား၊ မှန်ရာကို သံတော်ဦးတင်ပါမယ်ဘုရား။ ကျွန်တော်မျိုးတို.နှစ်ယောက်ဟာတော
ထဲကို အမြဲအတူသွားပြီး ထင်းခွေရောင်းစားကြပါတယ်ဘုရား။ နေ.စဉ် ထမင်းစားတဲ.အခါတိုင်း ကျွန်တော်
မျိုးမှာ ဆင်းရဲလွန်းပြီး မိသားစုဝင်များလှသောကြောင်. ဟင်းတောင်မပါခဲ.နိုင်ပါဘူး ဘုရား။ ဒါကြောင်.
ဟင်းပါတဲ. ကျွန်တော်.အဖော်ရဲ. လေအောက်ကနေပီး သူ.ရဲ.ဟင်းနံ.လေးကို ခံကာ ထမင်းမြိန်အောင်စား
ရပါတယ်။ ဒီကျေးဇူးတွေကို တစ်နေ.နေ. ပြန်ဆပ်နိုင်ပါစေလို. အမြဲဆုတောင်းနေခဲ.ပါတယ်။ ဒီနေ.မှာ လူ
တစ်ဦးဟာ ပြေးလွှားရင်းက အထုပ်တစ်ထုပ်ကို ကျွန်တော်မျိုးရဲ. မိတ်ဆွေရှေ.တည်.တည်.ပစ်ချပီး ထွက်
ပြေးသွားပါတယ် ဘုရား။ နောက်က လိုက်ဖမ်းကြတဲ.ရဲမက်တွေဟာ ခိုးထုပ်ခိုးထည်နဲ.အတူတွေ.တယ်ဆို
ရဲမက်တွေကို ရှင်းပြလို.မရတာနဲ. ကျွန်တော်မျိုးရဲ.ကျေးဇူးရှင်ကို ကျေးဇူးဆပ်တဲ.အနေနဲ. သေတူရှင်မ
ကွာ အဖမ်းခံမယ်လို. ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါဘဲ အရှင်ဘုရား။ မခိုးခဲ.တာ အမှန်ဖြစ်တဲ. ကျွန်တော်မျိုးတို.
အရှင်မင်းကြီးထားရင်လည်းနေ၊သတ်ရင်လည်း သေရမှာပါ အရှင်ဘုရား" လို.ရဲ.ဝင်.စွာလျှောက်တင်လိုက်
ထိုအခါဘုရင်ကြီးက " ဒီ ဟင်းနဲ.လေးခံပြီး ထမင်းစားမြိန်ရုံလေးနဲ.တောင် ဒီလောက်ကျေးဇူးသိတတ်တဲ.
သူကို ငါ.နန်းတော်မှာ အမှုတော်ထမ်းခိုင်းရရင် တော်တော်ကောင်းမယ်" ဟုဆိုကာ ထင်းခွေသမားနှစ်ဦး
Posted by မောင်မောင် at 14:11